Amadou HampâtéBâမှလူငယ်ထံသို့ပေးစာ - Afrikhepri Fondation
ကြိုဆို တွေးခေါ်ရှင် Sage နှင့်အာဖရိက
Cသင်နှင့်စကားပြောသူသည်နှစ်ဆယ်ရာစု၏ပထမဆုံးမွေးဖွားသူဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတစ်လွှားမှအရာရာကိုမြင်ခဲ့၊ ကြားနိုင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်သူသည်အရာရာကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာဟန်ဆောင်မထားချေ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့သူဟာထာဝရသုတေသနပညာရှင်၊ ထာဝရကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတောင်သူသင်ယူချင်တဲ့ဆန္ဒကအစောပိုင်းကာလတွေလိုခိုင်မာနေတယ်။
ထို့နောက်သူသည်မိမိအိမ်နီးချင်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်အညီသူ့ကိုချစ်ရနိုင်ပါလိမ့်ရန်, မိမိတို့ကိုယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်သိရန်သူ့ကိုယ်သူသိပ်ဒုက္ခပေးခြင်း, မိမိကိုမိမိသို့ကြည့်မျှော်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ သူကအတူတူလုပ်ဖို့သင်တို့အသီးသီးချင်ပါတယ်။
အာဖရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, ဥရောပ, အမေရိက: ဤခက်ခဲရှာပုံတော်ပြီးနောက်သူသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမြောက်မြားစွာခရီးစဉ်ပါသည်။ ရှုပ်ထွေးသောသို့မဟုတ်စိတ်စွန်းကွက်ခြင်းမရှိဘဲကျောင်းသားခုနှစ်တွင်သူနှင့်တွေ့ခွင့်ခံခဲ့ရသမျှသောဆရာ, ဆရာမများနှင့်ပညာရှိအပေါင်းတို့၏သွန်သင်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ သူကနာခံမှုရှိရှိသူတို့ကိုနားထောင်ပြီးစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတိကျစွာဤသို့သူတို့၏အမူအကျင့်များအတွက်အကြောင်းပြချက်ကသူတို့ထုတ်ပြန်ချက်များမှတျတမျးတငျထားနှင့်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျသူတို့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးရှုထောင့်ကိုနားလည်ရန်နှင့်။ အသက်တာ၏အကြီးပြဿနာကအပြန်အလှန်နားလည်မှုသောကွောငျ့တိုတိုမှာသူအမြဲယောက်ျားနားလည်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
ဆက်ဆက်, တစ်ဦးချင်းစီ, လူမျိုးလူမျိုးသို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုရှိမရှိ, ငါတို့ရှိသမျှသည်အသီးအသီးကတခြားကနေမတူညီတဲ့ပါ၏ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အားလုံးလည်းအလားတူအရာတစ်ခုခုကိုရှိသည်, ကြောင်းချင်းစီကတခြားထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့အသိအမှတျပွုသူနှင့်အတူဆက်ဆံရန်အဘို့အကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကွဲပြားခြားနားမှုအစားကျွန်တော်တို့ကိုခွဲထုတ်ခြင်း, ဖြည့်စွတ်ခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်သန့်စင်ဖြစ်လာသည်။ အရောင်များကို၎င်း၏အမျိုးမျိုး, လူတွေ, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏မတူကွဲပြားမှု, ကမ္ဘာ၏ဂုဏ်အသရေနှင့်စည်းစိမ်ကြောင့်တစ်ကော်ဇော၏ဂုဏ်အသရေလိုပဲ။ ဘယ်လိုပျင်းစရာနှင့် monotonous အတူတူမော်ဒယ်ပေါ်လုပ်ပါတယ်လူအပေါငျးတို့, ထင်နှင့်အတူတူပင်လမ်းအတွက်အသက်ရှင်နေထိုင်မယ်လို့ဘယ်မှာယူနီဖောင်းကမ္ဘာကြီးပါလိမ့်မယ်! ဘာမျှအားဖြင့်ငါတို့သည်ကိုယ်နှိုက်ကြွယ်ဝပုံကိုအခြားသူများအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ထွက်ခွာသွား?
တစ်ဦးချင်းစီ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုလေးစားနေချိန်မှာအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဒါကြီးတွေခြိမ်းခြောက်မှုများအတွက်, ယောက်ျား, သူတို့ကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းအဘယ်အရာကိုပိုမိုအလေးပေးထားပေမယ့်သူတို့ဘာတွေဘုံရှိသင့်ပါဘူး။ အဆိုပါအစည်းအဝေးနှင့်အခြားနားထောင်ပြီးပဋိပက္ခသို့မဟုတ်မြုံဆွေးနွေးမှုများ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်စည်းကြပ်ရန်အကြောင်း, ပင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အမြဲပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ အဟောင်းအာဖရိကန်မာစတာ "ငါ့" အမှန်တရားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟု "ta" အမှန်တရားလည်းမရှိ, ကဆိုသည်။ "THE" အမှန်တရားအလယ်၌တည်ရှိ၏။ ကချဉ်းကပ်ရန်, လူတိုင်းအတွက်အခြားဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ခြေလှမ်းစေရန် "သူ၏" အမှန်တရားအချို့ကိုရှင်းလင်းဖို့ရှိပါတယ် ...
နောက်ဆုံးနှစ်ဆယ်ရာစုမွေးဖွားလူပျိုတို့, သင်တို့ကိုတစ်ကြိမ်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြောင့်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နဲ့အကြားအသိပညာနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၏ဧရိယာထဲမှာဖွင့်လှစ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်နိုင်ခြေရန်ဖြစ်စေသည့်ခြိမ်းခြောက်မှုများအားဖြင့်ကြောက်မက်ဖွယ်နှစ်ဦးစလုံး လူတို့သညျ။ နှစ်ဆယ်ရာစု၏မျိုးဆက်လူမျိုးနှင့်အတွေးအခေါ်များတစ်စိတ်ကူးတှေ့ဆုံမြင်လိမ့်မည်။ ဒီဖြစ်စဉ်သိမ်းသွင်းပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပေါ် မူတည်. ၎င်း၏ရှင်သန်မှုသေချာပါလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်သေစေနိုင်သောပဋိပက္ခကြောင့်၎င်း၏ပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ, အဘယ်သူမျှမအနေနဲ့ဆင်စွယ်မျှော်စင်၌ခိုလှုံနိုငျသညျ။ စီးပွားရေးသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာစစ်ပွဲ၏အန္တရာယ်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရလျှင်သူတို့ခိုင်မာတဲ့သို့မဟုတ်အားနည်း, ကြွယ်ဝသောသို့မဟုတ်သူတို့သည်ဆင်းရဲသားဖြစ်ကြ၏ရှိမရှိအားလုံးသည်ပြည်နယ်များ, ယခုအလှနျမှီခိုဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကသဘောကျတယ်သို့မဟုတ်မဖွစျစေ, ယောက်ျားတစ်ဦးဟာရီကိန်းထကဲ့သို့တူညီသောဖောင်ပေါ်တင်ပို့နေကြပြီး, လူတိုင်းကိုတဦးတည်းအချိန်မရွေးခြိမ်းခြောက်လိမ့်မည်။ အဲဒါကိုသိပ်နောက်ကျမယ့်ရှေ့တော်၌အသီးအသီးအခြားအနားလည်ပြီးကူညီရန်ကြိုးစားမှပိုကောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်လော
ပြည်နယ်များ၏တူညီသောအလှနျမှီခိုယောက်ျားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုချမှတ်ထားတဲ့။ ယနေ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်သူတို့မှအလုပ်မလုပ်တဲ့ကြီးမားတဲ့စက်ရုံကဲ့သို့ဖြစ်၏: တစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းအစ, ကြီးမားတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်သည်မြေတပြင်လုံးစက်ရုံ၏ပြေးအခြေအနေနိုင်သည့်ကစားရန်တစ်ဦးနှင့်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။
လောလောဆယ်တစ်ဦးစိုးမိုးရေးအဖြစ်အကျိုးစီးပွားတိုက်ပွဲဖြစ်နှင့်မျက်ရည်များ၏လုပ်ကွက်။ ဒါဟာဖြစ်ကောင်းသငျသညျ, အိုလုလင်တို့သည်တဖြည်းဖြည်းနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်, လုပ်ဆောင်မှုနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဦးတည်ပိုပြီးရည်ရွယ်အသစ်တစ်ခုအတွေးအခေါ်တွေ, ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အဘယ်သူမျှမဖှံ့ဖွိုးတိုးတရှိနိုငျသောမပါဘဲငြိမ်းချမ်းရေးများအတွက်အခြေအနေဖြစ်လိမ့်မည်။
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု (ငါအထူးသိ, အထူးသဖြင့်ဆာဟာရ၏အာဖရိကန်လယျပိုငျးအထိခြဲ့ထှတောင်မပြောတတ်) အဓိကအားဖြင့်အားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာတာဝန်နှင့်သွေးစည်းညီညွတ်မှုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမဖြစ်ရပ်အတွက်သူသည်အအကြင်သူသည်လူတ, အထီးကျန်ဖြစ်ခဲ့သည်ရလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကမိန်းမ, ကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်အားလပ်ချိန်မှာတစိတ်တပိုင်းအဖြစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အမြတ်အတွက်အသက်ရှင်ရန်တစ်ဦးနေမကောင်းသို့မဟုတ်အဟောင်းကိုထားခဲ့မယ်လို့ဘယ်တော့မှမ။ ကျနော်တို့ကအမြဲပင်ဖြတ်သန်းလူစိမ်းအစားအစာနှင့်အမိုးအကာကိုတွေ့ရှိရာအကြီးအအာဖရိကမိသားစုအတွက်နေရာတစ်နေရာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရပ်ရွာဝိညာဉ်ခွဲဝေမှု၏အဓိပ္ပာယ်အားလုံးလူ့ဆက်ဆံရေးကျော်သဘာပတိအဖြစ်။ ကအားလုံးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်သို့သော်ကျိုးနွံအဆိုပါဆန်ပန်းကန်။
လူကိုသန့်ရှင်းသောသူ၏စကား, သူ့ကိုယ်သူတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ အများစုမှာမကြာခဏပဋိပက္ခသည် "palaver" မှတဆင့်ငြိမ်းချမ်းစွာအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြသည်: "စကားကိုဝင်ဆွေးနွေးရန်တွေ့ဆုံ, ငြိမ်ဝပ်လူတိုင်းဝတ်စိတ်တိုးပွားရှောင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ " ရွာ၌ငြိမ်းချမ်းမှုထိန်းသိမ်းရေးကျော်စောင့်ကြည့်ဟောင်း, လေးစားဖွယ်ဒိုင်လူကြီး။ "ငွိမျးခမျြး! "" သာငြိမ်းချမ်းရေးဆု! "လူအပေါင်းတို့သည်အာဖရိကရိုးရာဓလေ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကား၏သော့ဖော်မြူလာ Are ။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များ Initiative နှင့်ရိုးရာဘာသာတရားမျှပြင်ပငြိမ်းချမ်းရေးရှိနိုငျသောမပါဘဲတစ်ဦးစုစုပေါင်း Self-ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အတွင်းပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အတူ, တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းအားဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒါဟာငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လူကိုကျနော်တို့တည်ဆောက်ရန်ရာစုနှစ်များစွာယူသောအရာကိုတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အတွင်းစစ်ပွဲပျက်စီးခြင်းစဉ်အခါ, ကုမ္ပဏီတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပါ!
ထိုလူလည်းပတ်ဝန်းကျင်သဘာဝလောက၏ချိန်ခွင်လျှာတာဝန်ရှိသည်ဟုယူဆခဲ့သည်။ ဒါဟာအကြောင်းမရှိဘဲတိရစ္ဆာန်သတ်ဖြတ်မရှိအကြောင်းပြချက်များအတွက်အပင်တစ်ပင်ကိုခုတ်လှဲရန်တားမြစ်ထားခဲ့သည်။ ထိုပြည်၌မိမိ၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးမြင့်မြတ်တဲ့ယုံကြည်မှုဖန်ဆင်းရှင်ကပေးတဲ့သူကိုသာမန်နေဂျာခဲ့တာ။ တကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်လူများတို့သည်ဂြိုဟ်၏စည်းစိမ်ကိုလောင်ကျွမ်းနှင့်၎င်း၏သဘာဝကချိန်ခွင်လျှာကိုဖကျြဆီးရသောအတူငြိမ်ဝပ်စဉ်းစားပါလျှင်ယနေ့ယင်း၏အပြည့်အဝအဓိပ်ပာယျယူတဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်ဆက်မဆိုလူ့အဖှဲ့အစညျးကဲ့သို့အာဖရိကလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းယင်း၏အားနည်းချက်တွေကိုအလွန်အကျွံနှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ သငျသညျလူပျိုတို့နှင့်လူငယ်အမျိုးသမီးများ, မနက်ဖြန်၏လူကြီးများမှကအပြုသဘောရိုးရာတန်ဖိုးများကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် သိ. ကြမ်းတမ်းအကောက်ခွန်သူတို့ကိုယ်သူတို့၏သွားကြကုန်အံ့မှတက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူ့ဘဝမှာကြီးမားတဲ့သစ်ပင်နှင့်တူ၏စီမျိုးဆက်တစ်ဥယျာဉ်မှူးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါဥယျာဉ်မှူးဟာနှုတ်သည်မဟုတ်, လိုအပ်ပါကတဦးတည်းကြောင်း, အချိန်အတွက်ဂရုတစိုက်အသုံးဝင်သောအစားထိုးလုပ်ဆောင်, သေလွန်သောသူတို့သည်အကိုင်းအခက်သုတ်သင်နှင့်သိတယ်။ သူတွေဟာအတော်လေးဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှုမရှိဘဲ, အခြားသူများ၏ကြောင်းပေါ်ယူသူ၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအရှုံးမပေး, ဃသတ်သေကျူးလွန်မည်ဟုပိုင်းဖြတ်တော်မူ၏။ "ဒီသစ်သားအများအပြားရေ၌တည်းခိုခဲ့ကြောင်းသူက float, ဒါပေမယ့် caiman ဖြစ်လာဘယ်တော့မှစခွေငျးငှါ: တနည်းကား, ကိုစကားကိုသတိရကြကုန်အံ့,
လူငယ်လူဖြစ်ရ, ကောင်းမွန်သောဥယျာဉ်မှူးတစ်ဦးသစ်ပင်နက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်အမြစ်များလိုအပ်နေပါသည်, ထိုအမြင့်တွင်ပေါက်နှင့်အာကာသ၏အားလုံးလမ်းညွန်အတွက်အခက်အလက်ဖြန့်ဝေဖို့သိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြစ်တွယ်ပေမယ့်ထို့ကြောင့်, သငျသညျကွောကျရှံ့သောသို့မဟုတ်အရှက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲသငျသညျနှစ်ဦးစလုံးကိုပေးဖို့နဲ့လက်ခံရရှိရန်, အပြင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီကျယ်ပြန့်အလုပ်မှာတော့နှစ်ခု tools များလိုအပ်နေပါသည်: သင်၏မိခင်လျှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးခြားယဉ်ကျေးမှုများအစားထိုးလို့မရတဲ့မော်တော်ယာဉ်၏ပထမဦးဆုံး, အပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်; ကိုလိုနီခေတ်ကနေအမွေဆက်ခံသည့်ဘာသာစကား၏ဖြစ်လျှင်, စုံလင်သောအသိပညာ (ငါတို့အဘို့အပြင်သစ်ဘာသာစကား), ဆကျသှယျဖို့အမျိုးမျိုးသောအာဖရိကတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများကိုခွင့်ပြုခြင်းနှင့်သိကျွမ်းရသာရုံအဖြစ်အစားထိုးလို့မရတဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းအထိဖွင့်လှစ် အပြင်ဘက်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းယဉ်ကျေးမှုနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါ။
အာဖရိကနှင့်ကမ်ဘာပျေါတှငျလူငယျ, ကံကြမ္မာနှစ်ဆယ်ရာစုအကုန်မှာ, ခေတ်သစ်တစ်ခု၏အရုဏ်မှာ, သင်ကမ္ဘာနှစ်ခုကိုအကြားတံတားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကြောင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်: အတိတ်၏အကြောင်း, အဘယ်အရပ်ဟောင်းယဉ်ကျေးမှု သင်သည်လည်းအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံများ Adventures ၏ကြွယ်ဝသောပျောက်ကွယ်မတိုင်မီ၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာကို bequeath နှင့်မသေချာမရေရာမှုများနှင့်အခက်အခဲများနှင့်ပြည့်ဝ၏အနာဂတ်အကြောင်း, သင်တန်း၏, သာပုံစံမျိုးရယူ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲဒီမှာသေချာ non-ကြေကွဲ mutilating, ဒါပေမယ့်အခြားကခေတ်ဣနြေ္ဒဆက်လက်နှင့် fertilization ။
သငျသညျယူလတံ့သောရေဝဲမှာငါတို့ဟောင်းအသိုင်းအဝိုင်းတန်ဖိုးများ, စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်ခွဲဝေမှုသတိရပါ။ သငျသညျဆန်တစ်ပန်းကန်ရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဆိုပါနှင့်အညီ, တစ်ဦးတည်းမစားကြဘူး။ ပဋိပက္ခများကိုသင်သည်ခြိမ်းခြောက်လြှငျ, တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်စကားပြော၏သီလသတိရ!
ထိုအသင်အသုံးပြုလိုသောအခါ, အစားမြုံနှင့်အသုံးမကျသောအလုပ်အားလုံးကိုသင့်ရဲ့စွမ်းအင်ဖြုန်း၏, ကျောမိခင်ကမ္ဘာမြေကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောစစ်မှန်တဲ့စည်းစိမ်ကိုမှထင်, ကြှနျုပျတို့ဆွဲနိုင်အောင်ကအားလုံးကိုသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပေး လူတိုင်းအတွက်အစာကျွေးဖို့လုံလောက်တဲ့။ တိုတိုမှာတော့အားလုံး၎င်း၏ရှုထောင့်ရှိအသက်တာ၏ဝန်ဆောင်မှုမှာဖြစ်!
အချို့က 'ငါတို့ကိုမေးဖို့သိပ်ခက်တယ်' လို့ပြောလိမ့်မယ် ထိုသို့သောတာဝန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ထက်ကျော်လွန်နေပါသည်။ " အဘိုးအိုကိုငါလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပြောပြရန်ခွင့်ပြုပါ -“ သေးငယ်သော” မီးမရှိသကဲ့သို့အားလုံးသည်ကြုံတွေ့ရသောလောင်စာ၏သဘောသဘာဝအပေါ် မူတည်၍ အားထုတ်မှုအနည်းငယ်မျှမရှိပါ။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတိုင်းသည်အရေးကြီးသည်၊ သင်သည်အစတွင်၊ အရာဝတ္ထု၏မျက်နှာကိုပြောင်းလဲစေမည့်အဖြစ်အပျက်ကိုကျိုးနွံစွာပုံဖော်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုမှပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်မဟုတ်။ ခွန်အားကြီး။ ခမ်းနားထည်ဝါသော baobab သည်ဆာဗားပင်၏ဘုရင်သည်အစပိုင်း၌ကော်ဖီအလွန်သေးငယ်သောမျိုးစေ့မှဆင်းသက်လာကြောင်းသတိရပါ။
SOURCE မှ: http://www.deslettres.fr/damadou-hampate-ba-jeunesse-soyez-au-service-vie/
Amkoullel, အ Peul ကလေးသည်
11 €ကနေ 7,20 အသစ်
18 € 3,23 ကနေအသုံးပြုခဲ့သည်
€ 7,90 ကိုဝယ်ပါ
စက်တင်ဘာလ 24, 2020 12:41 pm တွင်၏အဖြစ်
အမျိုးအစား တွေးခေါ်ရှင် Sage နှင့်အာဖရိက